Star Power 1995: Awooda atoorayaasha 1995 sida filimada ku furmeen iyo sedexda maalmood ganacsigooda – Filimside.net
Star Power 1995: Awooda atoorayaasha 1995 sida filimada ku furmeen iyo sedexda maalmood ganacsigooda
Xiligaan la joogo Star Power-ka Bollywood-ka waa mid ku xeen daaban Sedexda Khans, Hrithik, Akshay, Ajay sidoo kalena waxaa soo raacaan oo xidignimo gaareen Ranbir, Varun iyo Ranveer intaas ayay Boxoffice India ku tilmaantaa kuwo maanta filim gadi karaan.
Hadaba Star Power-ka ama awooda atooraha waxaa lagu cabiraa fagta hore sida uu filimka ku gadi karo maalinta kowaad iyo sedexda maalmood ee ugu horeyso.
Waayo wixii intaas ka dambeeyo filimka fariintiisa ama sida ay sheekada daawadayaasha kaga helaan ayay ku xirnaan doontaa guusha uu gaari karo mashruuca ama guuldaradiisa.
Sidaa darteed keedka BOI diiwaanka saxda ah ee ku jiro wuxuu kasoo bilawdaa 1994 ilaa hada xogaha guud ee aflaanta dhameestiran.
Waxaan eegeynaa 1994 ilaa 2018 sanad walbo Star Power-ka atoorayaasha halka ay joogtay iyo sida fagta hore filimada u gadmi jireen atoorayaashiisii shacbiyada balaarnaa waa meesha aan ka fahmi karno 24-sano ee ugu dambeesay.
Hadaba kusoo dhawaada sanadii 1995 iyo Star Power-ka Bollywood-ka sida uu ahaa maalinta kowaad iyo sedexda maalmood ee ugu horeyso filimada lacagaha ugu badan soo xareeyeen:
Top First Day 1 1995 (Maalinta Kowaad Filimada Ugu Bilaabashada Wanaagsanaa 1995):
Filimka Ugu Bilaabashada Wanaagsanaa Trimurti Iyo Macluumaadkiisa Kooban:
Trimutri oo ay hogaamiyaal ka ahaayeen Anil Kapoor, Jackie Shroff iyo Shah Rukh Khan ayaa noqday filimkii ugu horeeyay maalinta kowaad keeno 1 Crore taariikh ahaan!
Filimkaan 310-tiyaatar ayaa laga daawaday hadal heyntiisa aad ayay u sareesay sidoo kalena todobaadka feestada ciida masiixiga sanadii 1995 ayaa la daawaday.
Waxay caddeyn u ahayd in sedex atoore caan ah filimkaan la isugu keenay iyo Action-kiisa oo xayeysiin balaaran loo sameeyay fagta hore daawadayaasha lagu soo jiitay laakiin sheekadiisa oo liidatay awgeed ayuu Flop ku noqday.
Atoorayaasha Ugu Bilaabashada Wanaagsanaa 1995:
Shah Rukh Khan (Trimurti & Karan Arjun) 2-filim (waa sanadkii awoodiisa si buuxdo loo aqoosaday labada filim ugu bilaabshada wanaagsanaa iyo filimkii lacagaha ugu badan soo xareeyay DDLJ ayuu la yimid 1995)
Govinda (Coolie No,1, Gambler & Andolan) 3-filim
Jackie Shroff (Trimurti & Rangeela) 2-filim
Salman Khan (Karan Arjun) 1-filim
Anil Kapoor (Trimurti) 1-filim
Sanjay Kapoor (Raja) 1-filim
Aamir Khan (Rangeela) 1-filim
Sunny Deol (Angrakshak) 1-filim
Sanjay Dutt (Andolan) -1-filim
Bobby Deol (Barsaat) 1-filim waa sanadkii uu Bollywood-ka kusoo biiray isla sanadkaan ayuu xidig noqday madaama filimkiisa kaalinta 9-aad ka galay 10-ka filim ee ugu bilaabashada wanaagsan sidoo kalena filimkiisa Super Hit noqday.
Akshay Kumar (Sabse Bada Khiladi) 1-filim
TOP INDIA FIRST WEEKEND (1995) (Filimada 3-Maalmood Ugu Horeesay Lacagaha Ugu Badan Soo Xareeyeen 1995):
Trimurti ayaa lacagaha ugu badan soo xareeyay sedexda maalmood ugu horeesay 1995 wuxuuna keenay 3.07 Crore waxaana kusoo xigay Karan Arjun oo isagana sedexdiisa maalmood ee ugu horeesay keenay 2.24 Crore.
Waxaa xusid mudan Ajay Devgn filimkiisa Haqeeqat oo kaalinta 11-aad kaga jiray filimada maalinta kowaad lacagaha ugu badan soo xareeyeen inuu kaalinta 10-aad kasoo galay kuwa sedexda maalmood lacagaha ugu badan soo xareeyeen sanadii 1995 wuxuuna booska kala baxay Akshay Kumar filimkiisa Sabse Bada Khiladi kaasi oo marka hore Haqeeqat ka bilaabasho wanaagsanaa.
F.G: Suniel Shetty Iyo Nana Patekar sanadii 1995 sanad wanaagsan uma ahayn madaama filimadooda aysan ka mid noqonin kuwii ugu bilaabashada wanaagsanaa halka sanadii 1994 Boxoffice-ka ay saameyn ku lahaayeen.
Filimka Dilwale Dulhania Le Jeyange oo ahaa midkii lacagaha ugu badan soo xareeyay sanadii 1995 sidoo kalena All Time Blockbuster noqday wuxuu cimri ahaantiisa keenay 53.31 Crore.
Laakiin DDLJ kaalinta 16-aad ayuu ka galay filimada ugu bilaabashada wanaagsanaa asigoo maalinta kowaad keenay 55 Lakh halka sedexdiisa maalmood ee ugu horeesay uu keenay 1.56 Crore laakiin wuxuu noqday filim shacabka gadaal ka jeclaadeen oo mudo dheer tiyaatarada saarnaa sidaasna darajada ugu sareyso ku gaaray sanadii 1995.
La Soco 1996 Filimadii Ugu Bilaabashada Fiicnaa Iyo Sedexda Maalmood Ugu Horeyso Lacagaha Ay Soo Xareeyeen Iyo Star Power-ka Atoorayaasha Sida Uu Ahaa Oo Ay Fagta Hore Daawadayaasha Kusoo Jiidan Kareen..
Waxaa Aqrisay 626